Mety amin'ny fihenan'ny lanja ve ny bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Am-bisikileta an-dalambe - vahaolana mety
Am-bisikileta an-dalambe - vahaolana mety
Mety amin'ny fihenan'ny lanja ve ny bisikileta?
Bisikiletadia misy fiatraikany ambany, fanatanjahan-tena azo ovaina izay afaka mandoro kaloria amin'ny tahan'ny kaloria 400-750 isan'ora, miankina amin'nylanjaan'ny mpitaingina, hafainganam-pandeha ary karazanabisikiletaataonao.
Ny bisikileta dia mety ho fomba iray lehibe hahatratrarana sy hitazomana lanja mahasalama. Ato amin'ity lahatsoratra ity, ankoatry ny zavatra hafa, dia nieritreritra izahay fa hanoro anao ny fomba tsara indrindra hanambarana fomba fanao ara-tsakafo tsara manodidina ny bisikiletanao, raha te hampiasa bisikileta ianao handoavana kilao vitsivitsy na hahazoana lanja hazakazaka mety indrindra antenaina fa ho anao tadiavo ny sasany amin'ireto toro-hevitra ireto mahasoa tsy ny fampihenana ny lanja fotsiny, fa koa ny hianaranao ny fomba ahafahanao mampiasa bisikileta ho toy ny ampahany amin'ny fomba fiaina salama sy mandanjalanja, ny fahalalahana bebe kokoa raha te handamina ianao na raha te-handamina dingana fampiofanana tsy dia henjana toa ny fototra ianao. Andro fiofanana tsy dia mahazatra ahy loatra, avy eo dia tena mety amin'ny fotoana rehetra, fa amin'ny fiofanana avo lenta sy mavesatra ary mampitombo ny dingana, ohatra, manosika ny angovo sy ny fepetra fanarenana ianao dia avo lenta ihany koa mba hitazomana ny fatiantoka kaloria ary miaraka amin'izay dia tazomy. fahasalamana raha ny tanjonao dia ny hahomby amin'ny làlan'ny asa fanompoana. Aza miandry herinandro vitsivitsy vao tonga amin'ny tampon'isao.
Tapa-kevitra na mieritreritra fotsiny fa ny fampihetseham-batana dia hampihena ny lanjan'ny ankamaroantsika dia mila hetsika amin'ny alàlan'ny drafitra amin'ny antsipiriany na atleta fiaretana ianao na mpitaingina bisikileta mpamorona. Ny fihenan-danja dia mitaky fiheverana betsaka na dia tsy misy fiheverana intsony ny sakafo maha-atleta mpifaninana mitady tsy fahombiazana. Ny fifantohana dia tokony hifantoka amin'ny fanahy.
Ny fahazarana manao fanatanjahan-tena indrindra amin'ny fampiroboroboana ny fampisehoana ary ny fanofanana voalohany handoro kaloria fanampiny dia mety hitarika haingana amin'ny fampiofanana be loatra ary tsy dia manampy loatra ary tsy manampy amin'ny tanjon'ny fihenan-tavy na fihenan-danja izany ary tsy manampy amin'ny fanatsarana ny fihenan'ny tavy amin'ny fotoana ilaina ny rano. mandritra ny alina raha te hihena ianao ary hanatsara ny fahaizanao bisikileta dia te hifantoka amin'ny famoizana tavy n ianao, midika izany fa mijanona tsy manam-paharetana ianao. Mandritra izany fotoana izany dia tsy midika akory izany hoe tokony ho be fatra-paniry ny tanjon'ny tsy fatran'ny kaloria ianao, koa mikendry ny manodidina ny 300, 500 ny fatiantoka kaloria 500 isan'andro raha tianao ny fahaverezan'ny matavy matanjaka fahazarana azo tratrarina amin'ny fiofanana tsy dia henjana loatra dingana, toy ny fiofanana fototra izay horesahintsika avy eo. Ny mosary amin'ny fatran'ny kaloria avo be isan'andro dia tsy hanampy na inona na inona, fa hisy fiantraikany amin'ny tanjonao sy ny tanjon'ny fihenan-danja izany.
Hisy vokany ratsy toa ny hery fiarovan'ny vatana malemy, fahaketrahana, tsy fahampiana metabolika, tsy fahampian-tsakafo ary havizanana avo lenta noho izany dia tianao ho azo antoka fa ny ezaka rehetra dia atao mba hahatratraranao ny lanjany tsara indrindra, voafehy sy miadana tsikelikely ary mijanona ho salama mandritra ny famenoana solika. Ny fomba haingana indrindra mankany Overtrain fa tsy mamitaka amin'ny antsipiriany izao dia mendrika hasongadina, fa tsy misy isa eo amin'ny mizana no sary feno momba ny fahasalamanao manokana amin'ny fomba itondranao ny sainao sy ny vatanao indraindray izay famantarana tsara kokoa amin'ny fahasalamanao ankapobeny. ary fiadanam-po. Ny hozina dia matevina kokoa noho ny tavy. Sahabo ho enina kilao ny lanjan'ny iray litatra amin'ny hozatra, ary tsy milanja sivy kilao ny tavy iray litatra.
Ny fomba iray mora kokoa an-tsaina an'izany dia raha manana hozatra sy tavy mitovy habe aminao ianao, ny lanjan'ny lanjan'ny 80% amin'ny hozatra, satria olona roa no mitovy lanja, ny vatany mety ho hafa tanteraka fa tsy ny mijery fotsiny ny mizana sy ny fihenan'ny lanja, na ny mijery ny mizana ary tsy mahita fahasamihafana eo amin'ny lanja na eo aza ny ezaka tsy tapaka hanatsarana ny fahaizanao bisikileta, mila mitazona na mampitombo ny hozatrao ianao ary mitazona ny isan-jaton'ny tavy amin'ny faritra mahasalama Raha diso fanantenana ianao fa manandrana mampihena ny lanjany, mety mendrika ny mitady ny fanampian'ny mpitsabo mpanampy amin'ny fampihetseham-batana ianao hanampy anao handrefy ny tavy amin'ny vatanao. Mety ho very tavy fotsiny ianao ary hanangana hozatra, izay tsy ratsy velively, koa aza raisina ho ratsy ho an'ny haben'ny tavy tena ilaina izay tsy mitovy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny mahazatra, ary matetika dia manodidina ny roa ka hatramin'ny dimy. isan-jaton'ny lehilahy ary 10 Voafaritra matetika ho valo ka hatramin'ny sivy ambin'ny folo isan-jato raha ny fahasalamana ho an'ny vehivavy dia iraika amby roapolo ka hatramin'ny telopolo isan-jato, miankina amin'ny taona, araka ny aseho amin'ity tabilao ity avy amin'ny American Council of Fitness. Ny tavy ambany amin'ny vatana dia sarotra hitazomana mandritra ny fotoana maharitra ary tsy misy tombony ara-pahasalamana ekena amin'ny haavon'ny tavy amin'ny vatana ambanin'ny 8%.
Misy, ary misy, maro ny voka-dratsy ateraky ny tavy ambany amin'ny vehivavy mifandraika amin'ny olana momba ny fahavokarana sy ny fiterahana, ny fifandraisana amin'ny fihenan'ny asa sy ny hery fiarovan'ny vatana, ny aretim-po ary koa ny haavon'ny angovo ambany. Ny tavy amin'ny vatana dia ampahany lehibe amin'ny fitazonana ny vatanao iray manontolo, Ka heveriko fa ny teboka manan-danja indrindra dia ny fahitantsika ireo mpamily manify manify eo amin'ny efijery antsika, mandritra ny taona Manodidina ny hetsika lehibe toy ny Tour de France ohatra, misy teboka roa na telo mandritra ny vanim-potoana ary matetika mandritra ny tapa-bolana fotsiny ny faran'ny vanim-potoana fa Grand Tour ohatra ary mampiasa matihanina ihany koa izy ireo mba tena hiatrehana izany fihenan-danja izany sy ny lanjan'ny hazakazaka amin'ny lala-mahitsy Ka inoako fa ny ezahiko lazaina dia ny tsy maka tahaka azy ireo, ary mitaingina na jereo mandritra ny taona ho toy ny grail masina ny fomba tokony hijerena amin'ny bisikileta satria, ireo asa ireo dia nitondra ny vatany ho amin'ny fetra farany. Mahazo ny ankamaroan'ny bisikileta sy ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny ianao raha te hihazona isan-jaton'ny tavy mahasalama fa tsy Tour de France hahazoana tombatomban'ny tavy amin'ny vatana tonga lafatra amin'ny herinandro alohan'ny Grand Tour. Mipetraha ankehitriny Tanjona ary asio marika ny fandrosoanao, izay tsy voatery ho tanjona mifototra amin'ny lanja.
Mety ho mora toa ny nanokana fotoana hanaovana onja akaiky anao izany ary manandrana mikapoka azy isan-kerinandro, na mety manandrana manana lalana tsy tapaka eo akaikin'ny tranonao heveriko fa ny teboka dia tsy mifikitra loatra amin'ny lanja eritreretiko manandrana mamorona fomba fiaina mahasalama kokoa sy fahombiazana amin'ny bisikileta tsaratsara kokoa Ny fanaraha-maso ny fandrosoanao dia afaka manampy anao hijanona amin'ny làlana maharitra mandritra ny fotoana lava kokoa. Tadidio ny zava-kanto very amin'ny fitazonana diary ao amin'ny iray amin'ireo lahatsoratro teo aloha mety ho tena ilaina amin'ny fitadiavana ny fandrosoanao, hahatonga anao hahatsapa fifaliana kokoa, ara-batana sy ara-tsaina, mandinika izay tena ezahinao ho tratry ny Lose Weight alohan'ny hanombohanao any. dia sakafo fad be sy drafitra fisakafoana maneno amin'ny haitao. Aleo atrehana izany, avelanao hisavoritaka kokoa ianao noho ny zavatra rehetra tsy tokony ananan'naben-katsaka ankehitriny? Ny ronono miaraka amin'ny voan-katsakao dia ny flakes katsaka ihany no an'ny voan-katsaka maina ny sakafo flakes katsaka Imean inona no hataon'izao tontolo izao raha ny fahitako ny fomba tsara indrindra dia ny sakafo ara-pahasalamana voalanjalanja miaraka amin'ny fitantanana ny sakafom-piainana mifanaraka amin'ny tsy fahampian'ny kaloria 300 ka hatramin'ny 500 isan'andro araka ny voalaza tetsy aloha ary ity misy toro-hevitra manan-danja izay tena hanampy anao hahatratra an'ity nVegetables ity amin'ny famenoana ny antsasaky ny loviao amin'ny legioma amin'ny ankamaroan'ny sakafo.
Ny voankazo koa dia ampahany lehibe amin'ny sakafo ara-pahasalamana ary mendrika ny hahafantaranao ny piramidan'ny sakafo ankehitriny satria te hahita legioma voankazo sy salady ianao ho loharanon-tsakafo lehibe indrindra sy ny ankamaroan'ny sakafo mifototra amin'ny zavamaniry avy amin'ny GCN, ny Kiss Recipe Book dia loharanom-pahalalana lehibe tsy ilazako hoe tokony ho vegan ianao, saingy ity boky ity dia manana resipeo sy hevitra maro momba ny fomba ahafahanao mamokatra voankazo sy legioma bebe kokoa ao amin'ny fomba mahaliana sy mamorona Mampifangaro ny Dietanao dia ampiasaiko amin'ny boky momba ny resipeo hafa satria Ataoko fa mbola mihinana hena aho, fa mahafinaritra ny mihinana sakafo tsy mihinan-kena na vegan na roa mandritra ny herinandro. Ahoana ny momba anao? Connor mbola mihinana Meyeah ve ianao mbola mihinan-kena nefa tsy hiteny aho hoe io no ampahany lehibe amin'ny sakafo fihinako, raha ny tena marina mihinana hena aho? isaky ny telo andro ary ny ankamaroan'ny fotoana ifantohako bebe kokoa amin'ny voankazo sy legioma ary salady dia afaka miakatra haingana ny kaloria tsy misy famenoana anao amin'ny manaraka, te-hanafoana ny fonosana siramamy rehetra ianao Chip Food Chips Lovelysweets Eny, ity dingana ity fotsiny dia ampy ho an'ny maro amintsika, na izany aza, ny fahaverezan'ny lanja miadana, ny fanaraha-maso ny ampahany mampalahelo, na ny sakafo tsara indrindra aza dia mety be loatra. Miezaha hihazona fihinanana proteinina ara-dalàna na eo aza ny fihinanana kaloria ambany.
Midika izany fa ampitomboinao ny proteinina amin'ny sakafo isan'andro ho 25 ka hatramin'ny 30 isan-jaton'ny fihinanana kaloria isan'andro. Mifantoha amin'ny loharanom-proteinina mahia toy ny hena, trondro, atody, tsaramaso tofu ary legioma izay hitazomana ny fihinanana proteinina, hitazomana faobe amin'ny vatana ary mifantoka amin'ny fihenan'ny lanja amin'ny fihenan'ny tavy. Miezaha mametra ny fiompiana an-tsokosoko ary mifantoha amin'ireo fa tsy Sakafo.
Fantaro ireo hevitra tena amboarinao amin'ireo kaloria tsy ilaina ireo ary mandray fepetra hampihenana azy ireo, raha toa ahy ianao dia mankafy mihinana porridge feno rehefa miala sasatra ao am-pandriana amboaranao dia manandrana manolo izany amin'ny yaourt Plain mety hanompo, fa jereo amin'ny fomba ahafahan'ny fanatanjahan-tena mameno sakafo tsara ary raha toa tsy misy dikany izany rehetra izany dia aza manahy fa mivoaka fotsiny ary manome solika ho an'ny fampihetseham-panao alohan'ny, mandritra ary aorian'ny. Aza mieritreritra ireo fotoana ireo ho toy ny toerana hikolokoloana ny sakafonao, izay midika fa manana sakafo sahaza ianao alohan'ny handanian'ny mpanazatra anao ny gliosida mandritra ny fampihetseham-batanao, ary rehefa vita ny fanazaran-tena dia hahazo iray proteinina avo iray ianao Recovery minitra Tehirizo ireo lesoka ireo ary mety tsy hahazo tombony amin'ny fampiofanana antenainao hitranga ianao ary mety hahatsapa fiankinan-doha mitombo be amin'ny fotoana hafa koa amin'ny andro, ka ho sarotra kokoa ny mijanona amin'ny lala-mahitsy.
Fiantohana ara-pahombiazana ny lasantsy amin'ny solika Ahenao kely ny sakafon'ny karbôtinao amin'ny andro nono sy fanarenana. Amin'izao andro izao dia afaka miala amin'ny fampihetseham-batana misy gliosida kely kokoa noho ny mahazatra ianao ary tsy hisy fiatraikany firy amin'ny rubriz fitandroanao ny andro alohan'ny andro fanarenana - sakafo kely-karbôtika ho an'ny sakafo hariva ary jereo ny fomba hahatongavanao. alao antoka fa ampy torimaso ianao, kendreo mandritra ny adiny valo eo ho eo ny alina tadidiko fa ny tsy fahampian'ny torimaso dia mety hanakana ny fahaverezan'ny tavy mba hiverenana amin'ny laoniny, fandaharam-potoana manodidina ny fanazaran-tenanao fa tsy amin'ny tenanao hitazona ny drafi-pisakafoanana mahazatra, ohatra rehefa any ivelany ianao Raha miverina amin'ny fiara ianao dia manana fihomehezana proteinina ary avy eo miandry toy ny adiny roa mandra-pisakafoanana antoandro na sakafo hariva. Maninona raha planina avy hatrany ny sakafo atoandro aorian'ny fampihetseham-batanao ary ampiasao ho pro, ka araho ny fanarenana dia mila miditra amin'izany ianao.
Manampia fotoana ambany fampiofanana aglycogen ambany. Ny fanaonao isan-kerinandro. Miezaha mitondra fiara 30 na 60 minitra alohan'ny sakafo maraina, fa alao antoka fa hahazo ny sakafo maraina mahazatra anao ianao rehefa vita ny fivoriana.
Ankehitriny dia misy porofo fa ny fanatanjahan-tena amin'ny fifadian-kanina toy izany dia afaka manampy amin'ny fahaverezan'ny tavy ary manohana ny fiezahana handoro tavy, saingy tsy ho an'ny rehetra izany. Tsy ho ahy izany. Halako izany ary tsy tena nampiasako izany loatra tamin'ny ora ao amin'ny fampihetseham-batako mety miasa ho anao, fa raha tsy manemboka anao izany, afangaro ny fotoam-pivorianao ary andramo hampiofana ny vatanao amin'ny fomba hafa, mety hidika izany manao ezaka hafa na raha te-hizotra amin'ny lalana hafa ianao Tsy mankany amin'ny majika ny ezaka mafy haavo hafa, fa ho antsika maro izay terena mandritra ny fotoana dia tsy manam-potoana hitondrana fiara dimy na enina fotsiny isika isan'andro, tsara izay nataoko foana, dia 30 segondra ny sprinting fotsiny. avereno inefatra amin'ny seza mandritra ny 30 segondra ary asio reps bebe kokoa rehefa mihasalama ianao.
Betsaka ny fampihetseham-batana fohy kokoa amin'ny fantson'ny gcn ka raha te-hiditra lalindalina kokoa ianao dia ampidiro ao anatin'ny fiofanana miaraka amin'ny rafitra arabo any amin'ny faran'ny avo azony atao ny rafitra arabo bitika kokoa noho izany. Afaka manao an'io amin'ny fitsangatsanganana ara-tsosialy, fa mahazo ny Buddi ianao. Ity dia fomba tsara iray hakana ny hafainganana ary hahatratraranao tanjona mety tratrarina. Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahatakatra ny fomba hampihenana lanja amin'ny fomba mahasalama sy maharitra Aza miverina miasa fotsiny ary manombatombana ary tadidio fa ny lanjan'ny fahasalamanao ara-batana sy ara-tsaina dia ampahany kely amin'ny singa marobe, mifandraika amin'ny zava-bitanao tamin'ny bisikileta. Ny bisikileta iray dia ny mankafy bisikileta amin'ny fomba fiainana salama. Tianay ho fantatra izay hevitrao momba ireo lahatsoratra ireo.
Raha manana fanontaniana ianao dia avelao izy ireo haneho hevitra
Mampidi-doza toy inona ny bisikileta eny an-dalana?
VALINY: Mampiahiahy ny mpamily variana sy mamo na ireo miaraka aminylalanafahatezerana manohitrampitaingina bisikiletydia tranga mahazatra miaraka amin'nympitaingina bisikilety. Fa raha ny ratra amin'ny hazondamosina ihany no resahina, dia ho ratsy lavitra ny mpandeha an-tendrombohitra. Mitovy ny ratra amin'ny lohany sy ny ratra mahazo azy.
Salama ry tary. Fa misy inona? Tom eto anio miaraka amina fanontaniana ho anao: mitsentsitra va ny bisikileta? Ary ny marimarina kokoa, mitsentsitra ny lalan'ny bisikileta voaloko? Ary ny marimarina kokoa: ny lalan'ny bisikileta voaloko - fantatrao ny tsipika eny amin'ny làlana izay mametra lalan'ny bisikileta - ratsy kokoa ve ireo karazana lalan-bisikileta ireo fa tsy misy n'inon'inona mihitsy? Fa maninona ity fanontaniana ity? Noho ny antony roa. Ny iray dia tamin'ny fihaonambe vao haingana ary nahita fampisehoana nataon'i Dr.
Jennifer Dill, mpikaroka bisikileta fanta-daza fantatry ny Portland State University, ary nanolotra fampahalalana mahaliana vitsivitsy izy. Ankoatra ny zavatra hafa, nandinika ny fahatsapana fiarovana ny bisikileta izy ireo. Nanontany olona vitsivitsy nitaingina bisikileta i Sothey hoe karazana fotodrafitrasa amin'ny bisikileta inona no tsapan'izy ireo fa azo antoka indrindra.
Ny tena nanjary ratsy tamin'ireto fotodrafitrasa samy hafa rehetra ireto dia ny lalan'ny bisikileta nolokoina izay nahagaga ahy fa hafahafa. Ny lalana bisikileta voaloko dia heverina fa hanampy ny bisikileta, sa tsy izany? Izany no antony maha-olona azy ireo. Izany no antony isian'izy ireo.
Ary nahagaga ahy ho toy ny iray amin'ireo karazana fotodrafitrasa bisikileta tsy azo antoka kokoa. Ny zavatra faharoa dia ny fandalinana iray hafa, vaovao ihany io ary avy any Aostralia ary ity fandinihana ity dia nijery ny vokatry ny fiara maotera sy ny fotodrafitrasa amin'ny fahatratrarana halavirana. Nohadihadiana ny fomba fandehanan'ny fiara amin'ny bisikileta eny an-dalana, miankina amin'ny fotodrafitrasa.
Amin'ireo zavatra rehetra nojeren'izy ireo dia singa roa teny an-dalana no toa nahatonga ireo mpitondra moto hisongona ny bisikileta akaiky kokoa noho ny zavatra hafa, ary ireo zavatra roa ireo dia fiara sy zotram-bisikileta nijanona teo amoron-dalana. Ka eny, ilay lalan'ny bisikileta nolokoina dia nitazana akaiky kokoa an'ireo mpitondra fiara fa tsy karazana fotodrafitrasa hafa, tsy misy na inona na inona mihitsy. Ka zavatra roa ireo no mahatonga ahy hanontany tena hoe inona no dikan'ny lalan'ny bisikileta.
Midika izany fa karazana hafahafa izany, sa tsy izany? Ireo zavatra ireo dia tokony hanampy ny bisikileta. Nieritreritra an'izany aho ary nahita hevitra ny hanao fanandramana kely amin'ny faritra tsy misy siantifiko manokana - raha ny marina dia tsy ara-tsiansa velively - fa tamin'ny ankapobeny nandritra ny iray androko teny am-piasana dia nametaka fakantsary tamin'ny bisikiletako aho ary noraketiko ny mitaingina sy nahita fiara mandeha eo alohako amin'ny fotodrafitrasa isan-karazany. Ary nieritreritra aho fa afaka mamakivaky azy ireo isika ary mijery.
Tsara eto, ka tsy handalo isaky ny mandeha bisikileta aho satria tena mankaleo, saingy tamin'ny ankapobeny dia nahenako ny isan'ny fiara nandalo ahy. Andao hojerentsika izy ireo. Voalohany dia te hijery ny lalana mahazatra aho, ka ireny dia arabe tsotra fotsiny, araben'ny trano fonenana, tsy misy fotodrafitrasa bisikileta ary mandeha ianao.
Andao hojerentsika ny fomba fitondrako fiara. SUV nandalo ahy, tsara izany, nisy toerana malalaka, tsy nisy hadalana loatra. Ity misy tranga iray hafa, ary nahasarika ny masoko ity iray ity.
Jereo ny fiara eo. Nomena folo metatra ity olona ity, mpamily mahafinaritra aho. Na io na mpitaingina bisikileta sendra nitondra fiara.
ampiasaina amin'ny fantsom-bisikileta taloha
Fa eny, jereo ny efitrano iray manontolo. Midika izany fa tena tsara izany amin'ny lalana mahazatra. Eny ary, ity misy iray hafa izay nahaliana kely kokoa.
Jereo, mandalo fiara nijanona aho ary mahatadidy ireo fiara nijanona na ireo singa rehetra izay mandrisika ny olona handeha eo ary hahita fa nisy fiara iray nanakaiky ahy teo. Tena tery izany, mahaliana. Mbola arabe fonenana io.
Ny tiako holazaina dia tsy nahatsapa loza aho, fa mbola tery ihany. Mahaliana koa izany. Làlana hafa itoeran'ny trano itoerana amina tanàn-dehibe kokoa.
Azonao atao ny mahita fa be dia be ny bisikilety amin'ity lalana ity ary tena tery io lalana io ka nieritreritra aho fa mahaliana ny mahita fiara mandeha eo alohako amin'ity lalana tery ity. Ary tsara izany satria afaka mahita an'ity lehilahy ity eo alohako ianao. Ary misy fiara izay fantatrao mijery ny lavitra izay tsy ratsy hoy aho.
Heveriko fa misy karazana iray metatra farafahakeliny mihoatra ny halaviran'ny halavirana. Ny faritra sasany dia manana lalàna milaza fa tokony ho telo metatra ianao. Inona ny metatra ho an'ireo namako amerikanina? Roa metatra sy sasany eo ho eo, zavatra toa izany? Tsy haiko? Jereo io.
Farafaharatsiny mba tsy zavatra ratsy izany. Heveriko fa ity motera ity dia mahavita asa tsara ary hitanareo fa niampita kely ny tsipika mavo izy ireo. Tsy nampidi-doza izany, heveriko fa ny zavatra tsara tokony hatao dia ny manome toerana ampy an'ilay bisikileta.
Ka tsy ratsy, tsy ratsy mihintsy. Ary avy eo dia heveriko fa manana iray hafa aho - mahaliana ity iray ity satria iray ihany io lalana io nefa eto dia mihodinkodina izy io ary somary voafintina ny raharaha ary hitako fa mampidi-doza tokoa io ampahany io. Ary ho hitanao ny mahamety azy eto satria tsy ampy ny habaka.
Niadana tokoa ity mpamily ity ary namela ny mpamily bisikileta handroso mialoha ary avy eo dia nanafaingana sy nandalo azy ireo tamin'ny elanelana ampy, noho izany, tsara ny motera. Matetika aho no nahatsiaro tena ho voaro amin'ny toe-javatra toy izao. Mahaliana, sa tsy izany? Ka io no lalan'ny bisikileta na izay lalana tsy misy fotodrafitrasa bisikileta.
OK, manaraka dia hijery ireo làlan-bisikileta nolokoana aho ka ity dia dian-doko fotsiny amin'ny asfalà ary andao jerena izay azontsika. Ka io no lalan-bisikileta alehako isan'andro rehefa handeha hiasa. Somary tery izy io, oh misy fiara mandeha any, tsy ratsy.
Ampy ny toerana any, heveriko fa tena tsara izany. Oh, Porsche mahafinaritra, eny, mazàna dia ireo Porsches izay mandalo ahy tena tery tokoa, saingy tena tsara izany. Tsy ratsy, tsy ratsy.
Eo indrindra. Ka io hariva io dia any ampitan'ny arabe eny an-dalana mody ianao izao dia somary misy fifamoivoizana bebe kokoa ankehitriny ka ahitanao fa misy toerana malalaka indray, tsy ratsy. Tahaka ny nolazaiko hatreto, zavatra roa no mahatsapa tsara amin'ny lalana roa sy ny làlan'ny bisikileta nolokoina.
Hooray calgarymotorists - manala baraka anao lalandava aho, saingy manaporofo ahy fa diso ianao, asa tsara anio! Saingy oh, indro misy jipy, jereo fa mihamafy kely kokoa ny olona iray, fantatrao tsara, nilaza aho fa tsy azo antoka izany, nefa efa manakaiky kokoa. Mety ho akaiky kokoa noho io metatra iray io ny tiako holazaina dia izaho irery izany rehefa hitako fa tsy fantatro hoe hatraiza ny halavany, saingy tadidiko fa nahatsapa ho somary tery izy io. Andao handroso bebe kokoa, misy iray hafa izay tsy dia tsara loatra na lavitra izany na eto dia iray ity, ity misy kamio lehibe ary jereo ilay iray izay azo antoka fa akaiky loatra, hitanao ny kodiarana, eo amin'ny ilany hafa izy ireo ny lalan'ny bisikileta ary tsapako koa, tena akaiky izy io.
Ka heveriko fa izany no olana fantatrao sy jerenao, afaka mijery mialoha eto ianao. Heveriko fa eny, niampita kely tamin'ny lalan'ny bisikileta mihitsy aza izy ireo. Aza manandrana manala baraka mpamily be loatra fantatrao, fiara lehibe sy zotra kely ity.
Ny tiako holazaina dia hoe angamba tsy mahay mitsara zavatra fotsiny izy ireo, angamba tsy nanandrana nandratra ahy. Ity misy indray iray hafa tery tery. Hitanao fa mahaliana, sa tsy izany? Tahaka ireo fampihetsiketsehana mihoapampana rehetra dia lazaiko fa taratry ny andro io - io lalana nolokoana io dia teo akaikin'ireto làlan-bisikileta ireto.
Midika izany fa nisy tranga maro, ny ankamaroan'ireo mpitondra môtô nandalo dia tsara be, saingy misy fotoana akaiky ihany - hitako ny antony, rehefa mieritreritra ianao fa ny lampivato vita amin'ny loko dia mitovy amin'ilay sakana ara-tsaina izay, rehefa tsy misy na inona na inona dia miankina amin'ny mpamily ny mampiasa ny didim-pitsarany hampahafantatra anao fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy te-hamono olona amin'ny bisikileta ka handeha malalaka izy ireo, fa raha io sakana io dia misy farafaharatsiny sakana ara-tsaina. artifisialy na sakana hita fa toa manakaiky kokoa azy ireo izy ireo. Mahatsapa izy ireo fa toa fantatrao fa ity no faritra misy ny bisikileta, ity no faritra misy ny mpamily, ary avy eo angamba tsy mahatsapa izy ireo hoe mila na tokony hifindra. Mahaliana izany.
firaketana haingana amin'ny bisikileta
Tsy manome tsiny manokana ireo mpamily fiara aho, na dia misy aza ny rambony any, saingy hitako fa mahaliana fa ny fotodrafitrasa amin'ity tranga ity dia saika mamporisika antso mafy. OK, mba hialana voly fotsiny dia hitako fa hijery karazana fotodrafitrasa bisikileta fahatelo dia ny làlan'ny bisikileta misaraka ary andao hojerentsika hoe hatraiza ny fiara afaka mandeha mba ho hitanao fa tsy olana amin'ity tranga ity. dia satria tena misy toerana malalaka eo anelanelan'ny lalan'ny bisikileta sy ny fiara. Ary misy sakana ary misy tsato-kazo eo afovoany ka tsy ho hitanao ny olona maro fantatrao manakaiky izany, tsy olana akory izany.
Nahatsiaro ho voaro kokoa aho noho ny karazana bisikileta hafa ary nandeha nitaingina bisikileta mitokana toa ity. OK, mankany amin'ny manaraka, hafa kely izany, hitanao ity manana sakana mivaingana mampisaraka azy ireo ary mijery ahy, lalana iray io ary miaraka amin'ny làlan'ny bisikileta ireo ary samy izy aho amin'ny làlambe dia toy izany koa Amin'ity tranga ity, saika mampihomehy ny mieritreritra satria tsy misy fiara mandalo, eo amin'ny 10 na 15 metatra miala ahy izy ireo. Ary jereo, hitanao eto daholo ny fifamoivoizana amin'ny bisikileta, fantatrao fa io no azo antoka indrindra amin'izy rehetra.
Midika izany fa nanakaiky ny fiara tamin'ity iray ity aho, ka zara raha olana izany. Ka any ianao no mandeha, ny lalan'ny bisikileta misaraka dia scenario hafa tanteraka, fahatsapana hafa tanteraka ary afaka mahatsapa izany ianao rehefa mitaingina moto - hafa fotsiny ny fahatsapana. Tsy manakaiky fiara ianao fa mahatsiaro ho voaro fotsiny.
Ary dia toy izany ny andro iray niova ho ahy. Ahoana ny hevitro? Heveriko fa marina daholo angamba ity fikarohana rehetra ity. Farafaharatsiny amin'ity fandehanana eny amin'ny arabe tsy misy fotodrafitrasa ity dia be ny fiara nanome toerana malalaka ho ahy, raha misy fiara mijanona eo dia somary tery kokoa ary avy eo raha ampitahaina amin'ny lalan'ny bisikileta izay nahatsapako ho azo antoka tanteraka.
Toy ny hoe lavitra be ahy ny fiara dia tsy niahiahy mihitsy aho izay mahaliana fa avy eo amin'ilay lalan'ny bisikileta nolokoina izay niantsoako ny akaiky indrindra izay maneho ny fikarohana nolazaiko anao teo aloha koa tena mahaliana ny mieritreritra fa a ny lalan'ny bisikileta nolokoina ho an'ny olona dia mety hampidi-doza kokoa ny fivezivezenao. Ary angamba tsy mahagaga izany, satria ny ankamaroan'ny bisikileta dia efa mahatsapa fa tsy azo antoka ny làlan'ny bisikileta voaloko, ka mieritreritra aho fa hiverina amin'ny fanontaniana eo am-piandohana izany: Mitroka ve ny làlan'ny bisikileta voaloko? Ie heveriko fa manao izany izy ireo. Ny fahitana azy dia mampidi-doza izy ireo, midika izany fa tsy mamporisika ny olona hitondra fiara izy ireo ary handalo eo akaikin'ireto làlan-bisikileta voaloko ireto ny mpamily.
Midika izany fa te-hahita angona vitsivitsy aho raha misy ny fifandonana eo amin'ny fiara sy bisikileta amin'ny làlan'ny bisikileta voaloko. Tsy manana izany angona izany aho raha tsy fantatrao raha fantatrao izany azafady ampahafantaro ahy fa ho azoko manantena ny hahita azy aho. Saingy miorina amin'ny antony fa raha misy antso akaiky kokoa amin'ny fandalovana dia mety hisy fifandonana ihany koa. Ka fantatro fa ny fehiny dia tsy manao làlan-bisikileta vita amin'ny loko vita amin'ny loko ve isika? Angamba.
Raha te-hamorona làlan'ny bisikileta ianao dia tokony hampiorina tsara azy ireo. Ataovy azo antoka izy ireo mba hamporisihana ny olona hampiasa azy ireo. Mahaliana tokoa.
Raha misy eritreritrao azafady ampahafantaro ahy na raha manana daty ianao dia tiako hojerena. Misaotra nijery, mihaona amin'ny manaraka. Matokia!
Inona no nitranga tamin'ny Road Cycling UK?
Orinasa ray aman-dreny an'nyRoad Cycling UK, Total vehivavyBisikiletaSYBisikiletaMagic dia mitanisa ny 'toerany ara-bola' Factory Media, ilay orinasa ray aman-dreny misy tranokala sy magazine dimy ambin'ny folo, anisany ny eninabisikiletalohateny, miditra amin'ny famonoana,lalana.DCefa nianatra.
Ireo mpandeha bisikileta dia mety ho somary mahasosotra ankehitriny. Ny tiako holazaina dia tsy ny akanjo mampihomehy na ny zotram-bisikileta ihany, fa toa mieritreritra izy ireo fa ambonin'ny lalàna rehefa mandeha amin'ny sisin-dàlana izy ireo, manana toerana ho an'ny famoizam-po amin'ny famohazana azy ireo, ary aza manery ahy handeha amin'ny jiro mena mitsambikina, Midika izany fa mampidi-doza tokoa izany, sa tsy izany, betsaka ny olona mieritreritra an'izany ary mino tokoa ny haino aman-jery fa misy mpitaingina bisikileta izay tsy manara-dalàna ny lalànan'ny fifamoivoizana, mampiempo ny sisin-dalana ary tsy mampiasa aroloha amin'ny findainy, ka misy ny bisikileta izay Tsy mahazo antoka ianao fa afaka mianjera ao anaty fiarany izy ireo, mety hidona ao aminao. Nahita bisikileta aho fa vao mainka miha mahery setra mandritra ny taona maro dia mety tsy ho azo vinavinaina tanteraka.
Ny mpitaingina bisikileta dia tena mihevitra fa ambonin'ny lalàna izy ireo ary tsy maninona na inona izany na inona, koa andao aloha hofaritana amin'ny resaka voalohany rehefa miresaka momba ny bisikileta isika, inona no tiana holazaina amin'izany? ity na koa hoe tiako holazaina fa ny olona sasany dia toa stereotype fa tsy misy bisikilety fotsiny fa misy olona mitaingina bisikileta ary hita fa ny ac yklist dia ampahany amin'ny stereotype manahirana an'ireo olona mandeha bisikileta, tsy hita ianao mpanararaotra na atsinanana voaofana, saingy misy io stérotypical stereo io amin'ny maha bisikileta anao, na dia mazava ho azy aza ny ankamaroan'ny olona mitaingina bisikileta dia mampiasa fomba fitaterana hafa, noho izany ny mpitaingina bisikileta dia tena tsy mitovy amin'ny hafa ary raha voafetra ny statistika Tsy misy porofo fa ny olona matetika dia mandika ny lalàna amin'ny bisikileta fa tsy amin'ny fotoana hafa. Betsaka amin'ireo bisikileta no nilaza fa nanao izany mba hanamafisana ny fiarovana ny olona izay mitana jiro famakiana indraindray satria matahotra izy ireo, raha nisy zavatra nanjo azy ireo taloha, dia mety nifandray akaiky tamin'ny fiara izay manandrana mahazo azy ireo ianao Mety ho eny amoron-dalana ihany koa noho io antony io, fa fiarovana ny ankamaroany ary fitehirizana tena Ka eny, mpandeha bisikileta sasany mandika lalàna fa na dia manao izany aza izy ireo dia mampidi-doza indrindra. Ny fiantraikan'io fihetsika io izay iomanan'ny olona azy dia tsy azo jerena rehefa jerenao ny statistika tadiavinao, ny tena loza mety hitranga izay inoanao fa mampidi-doza ho an'ny olona rehetra any UK sahabo ho 1.700 isan-taona izay vonoiko eny an-dalambe sy ny fomba maro amin'ireo no voadonan'ny bisikileta matetika eo anelanelan'ny aotra sy roa fa tsy mpanangana tena ho bisikileta vondrona izy ireo satria ny fahalemena misy anao dia mitandrina tsara na dia ao aza izy ireo ary manafintohina tanteraka ny mifanohitra amin'izay azonao any anaty fiara satria ny olona amin'ny fiara misy fehikibo fipetrahana, airbag, cages bestel, mahatsiaro tena ho voaro ka mora voan'ny mpaniratsira loharanon-karena amin'ny karazana heloka bevava mety hamono olona izy ireo na ny mpilalao fototra dia 13 taona any amin'ny faritra afovoany andrefana heveriko fa izaho nanome jiro mena nandingana ireo mpandeha bisikileta ary ny iray tamin'izy ireo dia tsy nahazo na inona na inona noho ny nandroahana azy rehetra, izay midika fa izany rehetra izany dia midika fa tsy maninona ny fandikana ny lalànan'ny bisikileta hoy aho hoe tsia, tsy mety izany. ny mitabataba, afaka? Mety hampatahotra ihany koa, saingy tsy dia mampidi-doza ny hafa satria tsy mampidi-doza izany hoe maninona no tsy miresaka momba ny bisikileta mampidi-doza ny olona rehetra, mety hoe satria ny olona amin'ny bisikileta no mamoha azy ireo na somary miharihary kokoa aza. fa tsy ho hitanao akory ny mpamily manao 30 ina 2001 amin'ny telefaona ao aorinan'ny kodiarana yepdu nahalala fa ho avy ity ampahany ity izay mety ho tadidintsika koa ireo mpitaingina bisikileta rehefa ao anaty fiara izy ireo dia mandika ny lalàna ihany koa ary raha mahavita azy ireo mampidi-doza anio, olona dimy no ho faty eny an-dalambenay ary 63 no hijaly mandratra fiainana ary amin'ny ankamaroan'ny tranga rehefa misy ny mpamily nahatonga izany fifandonana izany dia nahatonga izany fifandonana izany Ny fanelingelenanao finday mahazatra dia mety tompon'andraikitra amin'ny habetsaky ny ny fifandonana rehetra izao ireo zavatra izay jerentsika fahefatra mahery Ny fetra hafainganam-pandeha dia tsy fetra hitanao fa tanjona hahatratrarana ny fihetsika hafa izay misotro zava-mahadomelina mitondra fiara ary indrisy fantatrao fa mirongatra ny fisotroana zava-mahadomelina ao anaty fiara rehefa mianjera amin'ny fiara ianao amin'ny hafainganam-pandeha 30 mph, manana angovo mitovy, hery manimba mitovy amin'ny baomba kely novidinao izy ary izany no antony tsy maintsy anaovantsika fiaraha-monina manao fiezahana hiditra amin'ny olona rehefa mitondra io fiara io ianao, dia tena tsy maintsy raisinao amin'izay, raha jerena fa tamin'ny taona 2016 dia nisy mpandeha an-tongotra 448 novonoina teny amin'ny araben'ny UK fa mihevitra ny media fa ampahany lehibe satria rehefa mandre tranga iray misy azy isika ny F Fahadisoan'ny mpitaingina bisikileta dia tranga tena tsy fahita firy. lohateny goavambe niely manerana ny taratasy Niely eran'ny vaovao tamin'ny radio izany ary fantatry ny rehetra fa nanao bisikileta ny mpitaingina bisikileta ary loza raha sendra izany, saingy indrisy Maty an-dalambe isan'andro ny olona noho ny fihetsika sy ny tsy fitandreman'ny olona ao ambadiky ny kodiaran'ny fiara ary tsy hitaterana izany fa maro no tao anatin'izay folo taona lasa izay, ny isan'ny olona maty na naratra mafy tany UK saika nilatsaka ny antsasaky ny lalana, saingy ny ankamaroan'io tombontsoa azo antoka io dia tsapan'ny olona anaty fiara sy bisikileta izay saika mitovy ihany amin'ny loza mitatao.
Raha tena te-hampidi-doza kokoa ny arabe ataontsika isika dia tsy maintsy manilika ny fifanakalozan-kevitra sy ny haino aman-jery tsy hifantoka amin'ny bisikileta ary mankany amin'ny fiara, fa tsy hoe satria mpamily no bandy ratsy fanahy be dia be, fa ny fiheverana izay misy angano sy lainga fotsiny no tena nanampy tamin'ny famolavolana klinika. finiavana sy filaminam-bahoaka ka heveriko fa mila miteny amin'ny fomba olombelona isika, maka bebe kokoa ary hanaiky olon-kafa ary mety mila mihemotra sy mandritra ny fiainantsika manontolo isika ary mahatsapa fa ho an'ny ankamaroan'ny olona dia olona mila izany fotsiny mba hitsangatsangana ary hananana fahalalam-pomba bebe kokoa Misaotra noho ny fijerena Azafady zahao sy misoratra anarana Avelao ny fanehoan-kevitrao etsy ambany Ary raha tianao ny ataonay dia kitiho eto raha hijery ny fanohanan'ny osy
Mahasoa inona ny bisikileta amin'ny lalana?
Aretim-po kardia sybisikileta
tapakabisikiletamanentana sy manatsara ny fonao, havokavoka ary ny fivezivezena, mampihena ny risika aretin'ny aretim-po.Bisikiletamanatanjaka ny hozatry ny fonao, mampihena ny pulsa fitsaharana ary mampihena ny haavon'ny tavy.
Jereo - ity no Andriamanitro ô! Nody faty tanteraka ny filahiako! 'Hiverina amin'ity indray ity isika rehefa mijery ny olana manodidina ny fahasalaman'ny lehilahy sy ny bisikileta. Izany no antony niarahanay niasa tamin'ny iray amin'ireo urologista malaza eto Angletera - lehilahy iray antsoina hoe Anthony Koupparis - hanome torohevitra matanjaka sy azo ampiharina izay tokony henoin'ny lehilahy bisikileta rehetra ary rehefa mila antony hafa ianao fa tsy ny traikefa amin'ny klinika mba hinoanao izay nilaza izy fa lehilahy vy koa ary mandany fotoana be ao amin'ny lasely ireto tovolahy ireto. Alohan'ny hanombohantsika, ity misy lesona momba ny anatomika haingana.
Ny perineum dia misy koa ny lalan-drà goavambe sy ny hozatrao pudendal izay manome ny fahatsapana ny faritra ary koa manampy amin'ny fananganana. Etsy ambonin'ny perineum no misy ny prostateo, ny fihary any izay mamokatra tsiranoka azo avy amin'ny tsinay ary mamakivaky ny uretra. Raha jerena ny anatomia antsika sy ny endrik'ilay lasely, dia toa mety ny manao ny fifandraisana misy eo amin'ny bisikileta sy ny fanaintainana na ny tsy fahasalamana, ny fihenan'ny erectile sy ny olana amin'ny prostaty, fa andao jerena akaiky kokoa izany.
Noho izany dia toe-javatra namboarina nitaingina bisikileta ary rehefa afaka 30 minitra dia nivoaka aho ary hitako fa vetivety dia tsy nisy fahatsapana mihitsy tamin'ny penisako, izay tena mandeha tokoa, satria fantatrao fa niverina ilay fahatsapana. Ka amin'ny faran'ny andro dia mieritreritra aho fa tsy nisy zavatra nitranga tamin'ny fotoana maharitra, fa inona no mitranga ao anatin'ny fotoana fohy? Amin'ny ankapobeny dia noho ny tsindry apetrakao mivantana amin'ny perineum dia manindry ny nerve ianao ary manindry ny lalan-drà sasany ary izany no mahatonga ny tsy fahatomombanana. Rehefa tapitra ny fotoana hipetrahana eo amin'ny nerve dia hisy fahasimbana kely dia kely izay tsy fahasimbana maharitra fa mitarika ho amin'ny torimaso any amin'ny faritra karakarainy, izay no nanjo anao.
Fantatro bebe kokoa noho ny nataoko, mahazo bisikileta mety ianao ary misy olona mijery ny lasely sy izay rehetra miaraka aminy. Raha mandeha bisikileta mandritra ny fotoana lava ianao ary isaky ny tsy miteny ao amin'io faritra io izy ary mijanona ho moana ary avy eo dia manao zavatra mitovy hatrany hatrany ianao dia tsy azo ihodivirana ny fahavoazana maharitra fa ny fahaiza-misaina kosa no mitaky ary indray mandeha. dia mahazo ny mety sy ny lasely bisikileta mety fotsiny. Ny vanim-potoana iray manjavozavo aorian'izay dia tsy hanimba ny fahatsapana amin'ity faritra ity na ny fananganana ary ny toy izany amin'ny fotoana maharitra.
Avy eo ny lohahevitra manaraka dia ny fihenan'ny erectile ary avy amin'ny zavatra henontsika momba ny tsy fahasalamana, misy rohy ve eo anelanelan'ny bisikileta, ny tsy fahatomombanana miverimberina izay mitarika amin'ny tsy fetezan'ny erectile? - ny valiny dia tsia. Ny tena zava-dehibe dia ny maha-zava-dehibe ny tsy fetezan'ny erectile aloha. Ny fizotrany izay mitarika amin'ny olan'ny fananganana dia mitovy tanteraka amin'ny fizotrany mitarika aretim-po, izay mitarika aretim-po.
Ka raha voan'ny diabeta na tosidra ambony ianao na mifoka sigara, dia azo inoana fa voan'ny erectile ianao, nefa mety ho voan'ny aretim-po koa ianao. Ny tena marina dia hanomboka bisikileta ny ankamaroan'ny olona antonony. Raha izao, raha mpitaingina bisikileta ianao ary efa manana vanim-potoana tsy azo ihodivirana amin'ny erectile, ny eritreritrao voalohany dia tsy tokony hoe, 'Oh, ity no lasely noho ny bisikileta.' Tsy tokony halevina ao anaty fasika ny lohako momba izany Mety ho famantarana zavatra tsy mbola voamarina izany.
Mila manana an'io fizahana io aho. Toa azonao antoka fa sarotra ny mametraka karazana fahasimbana amin'ny nerveur pubic anao izay mety hitarika erectile erectile. Ka sarotra ve izany? Ny tsy fahampian-tsofina mihatra amin'ny perineum anao dia tsy hanome anao disfectile erectile.
Ary raha ny marina dia tsy hanome anao ny tsy fihenan'ny erectile izany. Mandehana ary jereo izany. Voalohany, ny fananana MOT araka ny fijerin'ny fony, dia maninona raha manana fitsaboana olana amin'ny fananganana? Midika izany fa feno ny faribolana.
Niainga tamin'ny zavatra somary nihomehy izy io, ka lasa tena olana ara-pahasalamana azonao alaina. Ary ho hitanao izany. Ahoana ny amin'ny olana mifandraika amin'ny prostaty sy ny homamiadan'ny prostaty.
Soa ihany fa tsy misy fiatraikany amin'ny homamiadan'ny prostaty ny bisikileta. Saingy tsy ny fivoaran'ny homamiadan'ny prostaty ihany, fa ny fanontaniana ihany koa raha diso ny fizahana homamiadan'ny prostaty anao. Ny iray amin'ireo zavatra ampiasainay mba hanomezana mariky ny risika homamiadana prostaty dia ny fanaovana fitsapana ra ary misy ny eritreritra fa raha mandeha bisikileta betsaka ianao dia mety hanorisory ny prostatyo ary mety io ny fitsapanao rà izay ampiasaina amin'ny PSA artifisialy. mampitombo ny fitsapana ra Antigène manokana prostaty Fitsapana ra izay tonga amin'ny teboka nataonao ity fitsapana ra ity dia nitombo tamin'ny fomba iray ary avy eo dia manana fitsapana maro be izay tsy nilainao mihitsy satria nandeha bisikileta ianao ary tena tsy marina izany. Tsia - misy Mety hisy vokany kely eo aminy izany, fa raha mandinika ny fikarohana mifototra amin'ny laboratoara amin'ny maro ianao, maro ny marika molekiola ho an'ny homamiadan'ny prostaty, bisikileta ary manao fanatanjahan-tena no tsy mampisy fahasamihafana na iray amin'ireo famantarana ny homamiadan'ny prostaty, noho izany dia tsara ny mandeha bisikileta. , manatsara ny fahasalamanao aretim-po sy ny zavatra rehetra mampihena ny mety homamiadana anao fa tsy misy fiatraikany amin'ny fizahana homamiadana prostaty tsy mety.
Ary avy eo mitohy. Soa ihany fa tsy misy ahiana be ny homamiadan'ny prostaty. Ny tokony hataontsika lehilahy dia ny mieritreritra an'izany.
Ka rehefa mihalehibe isika dia lasa voan'ny homamiadan'ny prostaty. Ka ny zavatra voalohany dia izao ny mahatsapa ny sasany amin'ireo soritr'aretina, ny zavatra tadiavintsika dia ny zavatra toy ny soritr'aretin'ny rano, ny fanaintainan'ny lamosina, ny olana amin'ny rà mandriaka ao anaty rano, ny zavatra toy izany miaina ireo zavatra ireo dia tokony handeha ianao urologist na dokotera ao amin'ny fianakaviana ary misy resaka ara-drariny mitarika ny fanombanana. Tsy midika izany fa hozahana homamiadan'ny prostaty ianao, fa io dokotera manokana io dia hitarika anao hiatrika ireo zava-tsoa amin'ny fitiliana ary angamba ireo lafiny ratsy amin'ny fitiliana.
Avy eo ianareo roa dia afaka manapa-kevitra raha handeha foana na tsia. Tsy tiako ny bandy tsy miraharaha azy io amin'ny voalohany. Ary amin'ny ankapobeny, hitantsika ireo zavatra ireo talohan'izao andro izao ary afaka alamina tanteraka izy ireo.
Firy taona no resahintsika eto? Firy taona no tokony hampanahy anao? Ary tsapako fa mety misy ohatra mampalahelo amin'ny tranga taloha fantatrao, saingy marina ny anao.
Noho izany ary miaraka amin'ny ahy amin'ny fanazaran-tenako dia manana sary diso be aho. Noho izany dia manana fanazaran-tena lehibe izahay ka hananan'ireo marary 30 ans hatramin'ny 80 sy 90s azy, ary raha manana soritr'aretina mampiahiahy ianao dia aza mikoropaka, apetaho amin'ny fasika ny lohanao ary mitondrà hevitra. inona ny olana, raha misy saina mena hihetsika ary raha ilaina izany. Ka tsy misy ny fifandraisana misy eo amin'ny bisikileta sy ny homamiadan'ny prostaty, fa ny homamiadan'ny prostaty kosa dia olana lehibe amin'ny ampahany betsaka amin'ny bisikileta satria lehilahy ihany izy ireo, antonony ary noho izany mila mieritreritra an'izany Tsy fantatro momba anao, fa ny fakana ahy lehibe indrindra tamin'ity resaka ity niaraka tamin'i Anthony dia ny hoe mety tsy tokony hataontsika ambanin-javatra ny fahasalamantsika, tokony hiatrika ny fahafatesantsika isika ary tena hitady fanampiana rehefa mila izany isika satria tsy mahazo gs mahia dia mety d izy no olana lehibe indrindra hatrehantsika rehetra.
Ankehitriny angamba aho nandalo fampahalalana somary be loatra rehefa nilaza taminao ny momba ny penisako tsy misy dikany ao anaty tionelin'ny rivotra fa mieritreritra an'io fanamarihana io angamba aho rehetra tokony hiezaka ny hanao resadresaka amin'ireo angamba ny namantsika ao amin'ny klioba mihazona azy amin'ny faran'ny herinandro, farafaharatsiny manaova resaka momba an'ity lahatsoratra ity, heveriko fa ity dia ho fanandramana tsara eo am-piandohana miaraka aminay ary raha te hahita lahatsoratra hafa amin'ity lohahevitra ity ianao. Manana iray fotsiny amin'ity fantsona ity izahay izay hanampy anao hividy lasely mety aminao hiatrehana ny olana voalohany amin'ny lohalika.
Mampihena ny vavony ve ny bisikileta?
Mandoro tavy ve ny bisikileta? Ie. Na dia ny anao azavavonyny hozatra dia tsy miasa mafy toy ny quad na glute-nao rehefa mitaingina, fabisikiletany natiora aerobika dia midika hoe may ianaomatavy.
teny frantsay bisikileta
Bisikiletamampitombo ny fiaretanao amin'ny sy ivelan'nybisikileta
Fanatanjahan-tena amin'nybisikiletaraha kely indrindra30 minitranyandrohampiorina ny fiaretanao hozatra sy hozatra. Amin'ny fanaovana ezaka tsy tapaka dia ho hitanao ny fanatsarana ny fahaizanao aerobic hahafahanao manao izanybisikiletalava na amin'ny mitaingina mahery kokoa.
Nahoana no ratsy ho anao ny bisikileta?
Saingy miatrika loza hafa ny mpitaingina bisikileta: ny fandotoana. Ny fikarohana vaovao dia nahitana fa ny mpandeha bisikileta dia mitroka ny sombin'ny karbonika mainty indroa amin'ny mpandeha an-tongotra. Ny fofona basy toy izany (aka soot) dia mifandray amin'ny fihenan'ny fiasan'ny havokavoka ary koa ny aretim-po.
Voadona daholo ve ny bisikileta?
Na lalana ianaohazakazaka am-bisikileta, bisikileta an-tendrombohitra, na triathlete, raha mandany fotoana amin'ny kodiarana roa ianao dia tsy azo ihodiviranafahasimbana. Manampy amin'ny fanaovananianjeratsy dia matetika loatra, fa na nyindrindrampandeha za-draharaha indraindray lavo.
Fa maninona no misy ny tsy fahampian'ny bisikileta UK?
Izy io dia olana manerantany mifototra amin'ny fangatahana mbola tsy nisy toy izany ary ny fitaovana famatsiana tsy azo antoka sy tsy azo ianteherana miditra amin'ny ozinina, ny vokatra vita hatramin'ny ozinina ka hatramin'ny fivondronana ho OEM, ary ny faritra hafa amin'ny fivarotana antsokosoko.
Hisy tsy fahampiana bisikileta amin'ny 2021 ve?
Fangatahanabisikiletadia mbola avo ihany, herintaona mahery taorian'ny nanombohan'ny valan'aretina. Ny olana,bisikiletatompona fivarotana dia nilaza fa ny fikorontanan'ny rojom-pivarotana dia nanjary lehibetsy fahampian'ny bisikileta. Manantena aho fa hanana 500 hafa, hoy i Breidenbach, nanamarika ireo fivarotana tamin'ny taon-dasa nivarotra betsaka eran'izao tontolo izaoBisikileta 2021lisitra.